Wasaaradda Boostada & Isgaadhsiinta oo qabanqaabineysa shirweynaha Isgaadhsiinta Soomaaliya iyo Jabuuti. – Xeernews24
Wasaaradda Boostada & Isgaadhsiinta oo qabanqaabineysa shirweynaha Isgaadhsiinta Soomaaliya iyo Jabuuti.
6. Februar 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Wasiirka Boostada, Isgaadhsiinta & Teknoolojiyada ayaa sheegay in wasaaraddu qabanqaabineyso shirweyne ay ka soo qeyb galayaan shirkadaha isgaadhsiinta ee dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti, kaas oo looga xaajoon doono sida la isaga kaashan karo mashruuca xadhigga internetka ee Djibouti African Regional Express (DARE) oo ay fikraddiisa leedahay shirkadda Isgaadhsiinta ee Jabuuti.
Wasiirka oo hadalkan sheegay ka dib markii uu soo gabagabeeyay socdaal 2 maalmood qaatay oo u ku tagay dalka Jabuuti ayaa sheegay inay shirkan ka wada shaqeynayaan Wasaaradda Isgaadhsiinta ee dalka Jabuuti, ujeeddaduna tahay sidii looga arrinsan lahaa mashruuca DARE oo ah xadhig internet oo isku xidhaaya Jabuuti iyo Mombasa, isagoo sii maraya Berbera, Boosaaso iyo Muqdisho.
Wasiirka ayaa intaasi ku daray in ansixintii sharciga isgaadhsiinta iyo tirada xadhgaha internetka oo ku yar dalka, ay fursado iskaashi oo heer gobol ah u furayaan shirkadaha isgaadhsiinta Soomaalidda.
Mudane Eng Cabdi Cashuur Xasan wuxuu sidoo kale xusay in Boostada Soomaaliya ay billowday in warqadaha loo soo marsiiyo dalka Jabuuti, iyadoo labada bilood ee soo socotana la qorsheynayo in warqadaha baxaya ay sii maraan dalka Jabuuti.
Safarka wasiirka ayaa imanaya qiyaastii 6 bilood ka dib markii uu dhiggiisa Jabuuti, Mudane Abdi Youssouf Sougueh, la saxiixday heshiis ay labada wasaaradood isaga kaashanayaan arrimaha isgaarsiinta iyo boostada.
“Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo wasiirka isgaadhsiinta Jabuuti oo si wanaagsan noo soo dhoweeyay. Waxaana rajeyneynaa in marka ay Muqdisho noogu yimaadaan dhammaadka bisha dambe in aan go’aan ka wada gaadhi doonno arrimaha aan isku soo afgaranay,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/02/wasarada-bosotada.jpg 768 1180 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-02-06 17:08:102018-02-06 17:08:10Wasaaradda Boostada & Isgaadhsiinta oo qabanqaabineysa shirweynaha Isgaadhsiinta Soomaaliya iyo Jabuuti.
Israaiil oo duqeyn ka geysatay Masar, Madaxweynaha Masar oo raali ka ah!(ceeb... Xiisadda u dhexaysa Imaaraadka iyo Qatar oo ay Si Wayn Ugu Faa’iideen Iran...